Noah BE ဘုရားကျောင်းနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (WACK ၏စာရေးသူ) - Your Brain On Porn
နောဧနှင့်အတူအင်တာဗျူးဘုရားကျောင်း (WACK ရေးသားသူ) BE
နောဧသည် BE ဘုရားကျောင်း တောရိုင်းမီးသတ်သမား၊ EMT၊ နည်းပြဆရာ၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ စပီကာနှင့်စာရေးဆရာ အသက် ၂၄ နှစ်တွင်သူသည်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသော porn စွဲသူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ ကိုးနှစ်သားအရွယ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ရခြင်းကြောင့်သူ၏ညစ်ညမ်းသောအကျင့်သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာကိုမည်မျှဆိုးရွားစေကြောင်းသဘောပေါက်သည်အထိမကြာသေးပေ။ သူပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီးနောက်ချာ့ချ်သည်သူ၏ဇာတ်လမ်းကို catharsis ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်ချရေးခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဝတ္ထုတိုမဟုတ်သောခေါင်းစဉ်ငယ်တစ်ခုတွင်မကြာမီကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲသူကဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာဖြန့်ချိရာ။ အဆိုပါစာအုပ် porn စွဲသို့လက်ရှိသုတေသနမှာကြည့်ဖို့နဲ့တခြားသူတွေကသူတို့ဘဝအပေါ်ရှိခြင်းနိုင်သည့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီလျက်, စွဲလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြထားခြင်းအရာတစျခုမှာသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်း porn စွဲ၏ပြဿနာတက်ဖမ်းရန်မရှိသေးပါကြောင်းအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျထိုပြဿနာများ၏ပြင်းထန်မှု၏အသိအမှတ်ပြုမှုတစ်ခုမရှိခြင်းရှိတယ်ထင်, သို့မဟုတ်ဤသုံးနေပြီယင်း၏အချိန်ယူရသော peer-ဝေဖန်အကြံပြုချက်စနစ်,့function ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်သလား?
သိပ္ပံသည်အမြဲလိုလို (နှင့်မှန်သည်) အချိန်ယူသော်လည်းတသမတ်တည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခြင်းသည် ပို၍ ပင်ခက်ခဲသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ငါတို့ဒီလိုညစ်ညမ်းတာကိုတစ်ခါမှမထိတွေ့ဖူးတဲ့လူငယ်အုပ်စုကြီးကိုစုပြီးအုပ်စုနှစ်စုခွဲပါ၊ တစ်ခြားအုပ်စုကိုလုံး ၀ ဝေးဝေးရှောင်ပြီး၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကိုအကန့်အသတ်မဲ့သုံးခွင့်ပေးပါ၊ ရလဒ်ကိုတိုင်းတာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ
ဒါပေမယ့်ထောက်ပံံ့မှုအရမ်းခက်ခဲတာကနေဒီစမ်းသပ်မှုကိုပြင်ဆင်ဖို့အတော်လေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအဟန့်အတားတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်လူတို့သည်၎င်းတို့၏လိင်မှုဘ ၀ နှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြောင်းပြောလေ့မရှိသလောက်နည်းပါးပြီး porn အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သူများထံမှပင်လျှင် (သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်) သူတို့၏အကျင့်ကိုဖျောက်လေ့ရှိသည်။ ငါတို့အဆုံးသတ်တာကညစ်ညမ်းကိုမသုံးတဲ့သူ၊ ပြသနာနဲ့ညစ်ညမ်းသုံးတဲ့လူအုပ်စုဘဲ၊ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေကိုရင်ဆိုင်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အရမ်းပျော်နေကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ရှက်လွန်းလို့အကူအညီတောင်းပါ။
အခက်အခဲများကြားမှကျနော်တို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှဦးဆောင်ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကို super-လှုံ့ဆော်မှုကြောင်း mounting သက်သေအထောက်အထားများကိုမြင်လျှင်နေကြသည်။ အင်တာနက်ကိုအခမဲ့မတူညီနှင့်လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ပစ္စည်းတစ်ခုန့်အသတ်ထောက်ပံ့ရေးကမ်းလှမ်းသောကြောင့်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကျနော်တို့တစ်ချိန်က (ကိုကင်း coca ရွက်၏သန့်စင်ပြီးပုံစံအတိုင်း) အထူးဆိုင်များအတွက်ဝယ်ယူရန်ခဲ့ smut ၏သန့်စင်ပြီး, စုစည်းဗားရှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ compulsive အသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြား porn မှဦးနှောက် reactivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖေါ်ပြခြင်းကင်းဘရစ်ထဲကဒီလေ့လာမှုထုတ်စစ်ဆေး: Voon et al ။ (2014)
porn အသုံးပြုမှုအနည်းဆုံးလူပျိုတို့ဖြတ်ပြီးယခုနေရာအနှံ့မှတော်တော်လေးနီးစပ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ Wack စွဲဖြစ်ကြသည်သောသူတို့ကိုအာရုံစိုက်။ သငျသညျ porn စွဲရည်ညွှန်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သောဥစ္စာများအလွဲသုံးစားမှုများအတွက် DSM-V ကိုအဖြေရှာတဲ့စံအသုံးပြုခြင်း, သင်သည် non-စွဲအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သူအများအပြား porn ကြည့်ရှုရှိပါတယ်ထင်ပါသလဲ
ငါ "addict" အမျိုးအစားနှင့် "non-addict" အမျိုးအစားတို့အကြားမည်မျှအသုံးပြုမည်ကိုခန့်မှန်းရန်တွန့်ဆုတ်နေပါတယ်။ စွဲလမ်းမှုသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးအသုံးများသည့်ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူဟုမည်သည့်အခါကမျှစဉ်းစားမိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စွဲချက်တွင် (၁၁) အနက် (၉) ခုရခဲ့သည် (၆ နှင့်အထက်ကပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြသည်) ။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်တံဆိပ်ကပ်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည့်အရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်ပြproblemsနာဖြစ်စေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရုံမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုအနည်းဆုံးလအနည်းငယ်ကြာအောင်ရပ်တန့်ရန်နှင့်သတိရရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ဘဝကအဲဒါမပါဘဲဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားပြီလဲ။
အချို့သောလူများအတွက်အခြားသူများကိုတဦးတည်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ပါတ်သွားခဲအချိန်ရှိသည်မယ်လို့စဉ်တစ်ဘီယာတစ်ဦးပျော်စရာပေမယ့်လုံးဝသာသနာအဖျော်ယမကာဖြစ်ပါသည်, အချို့ချဉ်အပင်မိသားစုထက်သူတို့ကိုပိုအရေးကွီးဖြစ်လာကြပါပြီမှာအမှတ်အရက်အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာဘဲလျက်, ကျန်းမာရေး နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှု။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပုလင်းထဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရဆည်းပူးကြသူအရက်သမား, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်စွဲလမ်းသွေးဆောင်တ္ထုများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကံမကောင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းများအတွက်ချိတ်နှုန်းကိုအမှန်တကယ်အရက်သည်ထက်အများကြီး ပို. မြင့်မားသည်ကိုငါသိ၏။ ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံကျကျလိင်, ဘီယာကိုမသောက်သူတွေကိုအရက်သမားဖြစ်လာထက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖြစ်လာ porn စွဲရှုမြင်သူအများအပြားကပိုကလူကိုရှာခြင်းငှါကြိုးနေကြတယ်လို့ပဲ။
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေပြော compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုငါ့လိင်, ငါ့စိတ်ခံစားမှု, ငါ၏ဦးစားပေး, ကျန်းမာဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းရန်ငါ့နိုင်စွမ်း warped ။ ကြှနျတေျာ့စာအုပ်သုတေသနပြု၌ငါသည်ဤဆိုးကျိုးများနှင့်ပိုပြီးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်တို့တွင်အဝေးရှားပါးထံမှဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်များစွာသောလူအတော်များများ porn ကိုအသုံးပြုပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဖြတ်ကတည်းကကျွန်မရဲ့လှုံ့ဆျောမှု, ငါ၏လိင်, ငါ့ Self-လေးစားမှုနှင့်ချစ်ရန်စွမ်းရည်ပွနျလညျရှာဖှတှေ့ခဲ့ကြပြီးခစျြတျောမူလိမ့်မည်။ ငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ကြောင်းကိုလူတစ်ဦး၏ကြင်နာလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအများကြီးပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါ့ကိုခိုလှုံပါ၏။
ပြန်လည်နာလန်ထူရန်သင့်မှတ်စုတွင်, သင်ရုံလင်းလင်းရည်ညွှန်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှာ abstinence များအတွက်လိုင်းဆွဲပေမယ့်ဒီအလင်းမှာ, ပြောတရားမျှတလိမ့်မယ်စတာတွေလိုက်စားရုပ်ရှင်များကဲ့သို့အအများကြီးနိမ့်-Level လှုံ့ဆော်ပစ္စည်း, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ Facebook ကိုကြည့်ရှုခြင်း, မပါဝင်ပါဘူး ကျနော်တို့ကအောက်ခြေအဆင့်မှာညစ်ညမ်းစေပါတယ်သောလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုလူတွေကိုအခြေအနေမှစတင်ခဲ့ပြီးတစ်ခုတိုးညစ်ညမ်းကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျသလော
လူအများစုကရုပ်မြင်သံကြား၊ ကြော်ငြာနှင့်အင်တာနက်ကဲ့သို့သောမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများသည်လက်တွေ့ဘ ၀ ၌ထက်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်လိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအကြောင်းအရာများကိုမြင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး၊ အထူးသဖြင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်မဆက်ဆံမီဤအရာအားလုံးကိုမြင်တွေ့သောလူငယ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွင်းခံအဝတ်အစားများ ၀ င်ရောက်သောအခါလူတိုင်းမျက်စိကွယ်ကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မအကြံပြုပါ၊ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲသူများအတွက်ဤသို့သောအမြင်မျိုးသည်အထူးသဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့်များ၌ပြန်လည်နစ်နာမှုကိုဖြစ်စေသောချောသောလျှောစောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှစတင်စေနိုင်သည်။
ငါအသက် ၉ နှစ်ဝန်းကျင်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ၊ ငါဟာလိင်မှုကိစ္စကိုလိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျွံချထားခြင်းကြောင့်အခွင့်အလမ်းရလာရင်စစ်မှန်တဲ့လိင်အတွက်စိုက်ထူမှုကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်သို့ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ငါအဖော်နှင့်အတူရှိခဲ့စဉ်ကသာလျှင်လိင်ပျော်ရွှင်မှုမျှော်လင့်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းသောလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံသူများဟုမသတ်မှတ်နိုင်သောသူများပင်နှိုးဆွခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ထပ်တူထပ်မံမလုပ်ဘဲအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်လိုသောအခြားပြန်လည်ထူထောင်ရေးသမားများအားကျွန်ုပ်ထပ်တူထပ်မျှအကြံပြုပါသည်။
သငျသညျကမျြးစာ၌ဝေမျှသက်သေခံချက် number ကိုတစ်ကယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့အပြန်အလှန်ထောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အဓိပ္ပာယ်ပေးသည်။ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်သင်ဤအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းငှါမသာလူတွေကိုကူညီ၌တည်ရှိ၏ထင်ပါသလဲ, ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ဆိုးရွားစွာပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူးသောသူတို့အားစိတ်ချလော
ငါကထောက်ခံစာငါ့စာအုပ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းမှရည်စူးဖို့လုံလောက်တဲ့အရေးကြီးသောထင်! သင်ကမျှော်လင့်သောအရာကိုအကြှနျုပျကိုငါဝေးတစ်ဦးတည်းအနေဖြင့်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြကုန်အံ့, နှင့်မည်သို့ပြန်လည်အကြောင်းကိုသွားကြဖို့ကပြောသည်အဖြစ်အောင်မြင်မှု-ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သောတခြားသူတွေရဲ့ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုငါ့အဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တွင် Wackကျွန်ုပ်သည်စာဖတ်သူများ၏ထူးခြားသောသမိုင်းနှင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ လူငယ်များနှင့်လူကြီးများမှထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ယောက်ျားမိန်းမများ၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုသူများနှင့်ခက်ခဲသောကိစ္စရပ်များအပါအ ၀ င်အမြင်အမျိုးမျိုးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုငါလိုချင်ခဲ့တယ်။
စာအုပ်အဘို့အသုတေသနပြုတဲ့အခါသင်ရှာတွေ့သုတေသနအရှိဆုံးအံ့သြစရာ / တုန်လှုပ်ဖွယ်စာရင်းဇယားသို့မဟုတ်အပိုင်းအစကဘာလဲ
ဂရိတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို! ကျနော်ကျိန်းသေသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏တသမတ်တည်းအသုံးပြုမှုကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပွောငျးလဲနိုငျမည်မျှနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။ porn စွဲ Non-စွဲထက် porn လှုံ့ဆော်မှုဖို့အားကောင်းဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသပေမယ့်လည်းဒီအစွဲ Self-ထိန်းချုပ်မှု, ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. အုပ်ချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအားနည်းစေနိုင်သည်ကိုပုံပေါ်ဘူးမသာ။ မကြာသေးမီကဂျာမနီမှာထုတ်ဝေဒီလေ့လာမှုကိုကြည့်ပါ: Kühnနှင့် Gallinat (2014)
porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပွင့်လင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှကူညီပေးနေနှင့်လည်းသုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တိကျ Self-အစီရင်ခံစာတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဘယ်လိုအရေးကြီးသလဲ
ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်လူများအားမည်သို့ဖွင့်ဆိုရန်သင်ယူခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်မှီခိုမှုကိုကျော်လွှားရန်နှင့်နားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ငါ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြောခြင်းအားဖြင့်ငါကအရှက်မရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံလာတယ်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်ရှေ့သို့တိုး။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူတယောက်ဖြစ်လာရန်တန်ခိုးရှိလေသည်။ ဒါကမလွယ်ကူခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအသေချာဆုံးပဲ။
လျှို့ဝှက်ချက်များသည်သင်သယ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှပိုလေးသောအလေးချိန်များနှင့်တူသည်။ မင်းအတွက်ပြဿနာတစ်ခုလို့ထင်တဲ့စွဲလမ်းမှုတစ်ခုခုနဲ့ရုန်းကန်နေတဲ့သူရှိရင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပါ။ သင်လိုအပ်လျှင်အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှုအသိုင်းအဝိုင်း (သို့) ကုထုံးဆရာတစ် ဦး နှင့်အမည်မဖော်ဘဲသင်ထိုနေရာတွင်မရပ်ပါနှင့်။ မင်းရဲ့ပြသနာတွေကိုမင်းလူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလေလေမင်းရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကပိုပေါ့ပါးလာလေ၊ မင်းပိုအားကောင်းလာပြီးပိုအားကောင်းလာလေဖြစ်လာတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာမင်းဟာသူတို့ရဲ့လှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့အခြားသူတွေကိုသူတို့ရဲ့လှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတာကိုမင်းကူညီနိုင်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
သငျသညျ porn အသုံးပြုမှုကိုအစဉ်အဆက်ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်ထင်ပါသလား?
လူအချို့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေနိုင်သော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ libidos များသည်အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမောင်းနှင်စေသည်။ ကျန်းမာသောလိင်ဆက်ဆံမှုသည်အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်ကြာရှည်ခံသောအဆင့်များစွာကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ Porn သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုစနစ်များကိုအမှန်တကယ်မရှိသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်လှည့်စားသည်။ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးခံစားမှုပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ၊ သင့်ကွန်ပျူတာထဲတွင်မိန်းမများမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏအချည်းနှီးသက်သက်သာဖြစ်သွားတတ်သည်။ ထိုရုပ်ပုံများသည်အလင်းရောင်နှင့်အရိပ်မျှသာဖြစ်ပြီးလူအများစုကလိုက်စားရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်မဖြုန်းတီးရန်မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ကြသည်။
တစ်ဦးပြန်လည်ကောင်းမွန်စှဲလမျးသူအဖြစ်သင်ယခုလိင်ကနေရပျော်မွေ့သငျသညျ porn ထံမှရရန်အသုံးပြုအရာကိုညီမျှသည်ရှာရမလဲ? ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသော, ပိုကောင်းဖြစ်တယ်, ဘယ်လို?
ကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးကိုစကားလုံးများအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ခက်သည်။ ငါ porn ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာငါပိုငတ်မွတ်တယ်၊ ပိုများတယ်၊ ပိုများတယ်၊ ပိုပြီးအစွန်းရောက်တယ်။ ငါကအပျော်အပါးလိုက်စားတာကအစစ်အမှန်လိင်ကအဆင်မပြေဘူး၊ မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးစိတ်အလိုလိုက်ခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိသောတစ်နှစ်ခွဲကျော်အကြာတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အကြည့်တစ်ချက်သို့မဟုတ်အပြုံးသည်ကျွန်ုပ်အားခွန်အားတစ်ခုပို့ပေးသည်၊ စစ်မှန်သောလိင်သည်မနှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်ကတော့ငါသာငါ့လက်ကိုသုံးပြီးအပျော်ကိုခံစားနိုင်ပေမယ့်ခုတော့ငါ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုကတစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားပြီ၊ ကြီးမြတ်တဲ့လိင်မှတဆင့်တကယ့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုက porn သုံးရာမှာလုံးလုံးလျားလျားမရှိတာဘဲ။ ငါဆန္ဒရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တစ်ညသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှင့်တစ်ရှုးဘူးတစ်ဘူးတည်းနှင့်တွေ့ဆုံမှုတစ်ထောင်ထက်ပိုတန်ဖိုးရှိသည်။
သင်သည်အဘယ်သို့ porn စွဲ၏ဧရိယာ၌လာမယ့်ကိုမြင်ရဖို့လိုပါသလဲ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုပိတ်ပင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်မထောက်ခံပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ရန်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုသုံးခုရှိပါသည်။ ပထမ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းသောအပန်းဖြေရုံမျှသာမဟုတ်ကြောင်း၊ လူအများသိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောလိင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့သည် Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ ဒါကြောင့်လူတွေဘာတွေမှားနေတယ်၊ ​​ဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့နှစ်တွေကုန်သွားစရာမလိုတော့ဘူး။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ထိမိလဲရန်ပိုမိုခက်ခဲစေရန်လိုအပ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ရန်တောင်းဆိုခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်မှုကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းမရှိပါက ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ထောက်ခံသည်။ ရွေးချယ်ချင်သောသူများက၎င်းကိုအလွန်အမင်းစိတ်ပူစရာမလိုသူများကလုပ်နိုင်သည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့်မိဘများသည်ညစ်ညမ်းမှုပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့ကိုယ်ကိုပညာပေးရန်၊ လိင်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုအဆင်ပြေစွာပြုလုပ်ရန်နှင့်သူတို့၏ကလေးများအားသူတို့ကြုံတွေ့ရမည့်ခေတ်သစ်အန္တရာယ်များအကြောင်းပညာပေးရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်မိသားစု ၀ င်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့မဖြေရှင်းနိုင်သော၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများကြောင့်သာဤပြproblemနာများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအားသင်ကြားခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းမပြုလုပ်ပါက၊
ပထမတော့အလွန်ခက်ခဲ။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးကျွန်မသင်ယူနှင့်ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခု၏သဘောပေါက်, ပိုငါကတခြားသူတွေကိုကူညီပေးဖို့အကြီးအလားအလာကြောင့်ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေဖို့ခဲ့ကြောင်းသိသည်။ ကြှနျတေျာ့မိတ်ဆွေအများအပြားက porn နှင့်သူတို့၏ဘဝများနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့စိတ်ကူးတိုးတက်မှုသုံးပြီးကတည်းကဆေးလိပ်ဖြတ်ကြပါပြီ, ငါတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူးအများအပြားအခြားလူများဤသတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းအဘို့အကြှနျုပျကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ငါလက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
ယခုတွင်ငါသည်အောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းလိင်ကာလအတွင်းတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စိုက်ထူအဆက်မပြတ် porn မြင်ကွင်းများစိတ်ကူးရန်မလိုဘဲ, ငါခံစားရအာရုံအများကြီးရှိပါတယ်, အများကြီးတိုးတက်လာတယ်။ အတော်လေးခဏအဘို့အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူပြန်ထိုနောက်ငါနေဆဲပြင်းထန် porn-သွေးဆောင်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခဲ့ပေမယ့်အခုအဖြစ်ကောင်းစွာငြိမ်ထားပြီး, ငါကွန်ဒုံးနှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်စဉ်အတွင်း orgasm နိုင်ပါ၏။
ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကပိုများတယ်၊ ပိုပြီးနက်ရှိုင်းတယ်။ ၁၂ နှစ်လောက်အချိန်ကာလတစ်ခုလုံးကိုမငိုခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်ကာလက porn ကိုစကြည့်တဲ့အချိန်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာကိုကျွန်မသိခဲ့တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်နိုးကြားနေပြီးဝမ်းနည်းဖွယ်ဝမ်းနည်းမှုမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ရာအထိစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုခံစားနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။
ငါမရှက်ရှိသည်။ ဒီခရီးခင်မှာကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ porn နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်သင်ယူကြောင့်တစ်ဘုံလှုပ်ရှားမှုခဲ့တာသိတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကဂုဏ်ယူဘယ်တော့မှခဲ့လေသည်။ အခုတော့ကျွန်တော့်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ငါကိုချစ်လူတို့နှင့်အတူပင်သူစိမ်းတွေနဲ့လုံးဝရိုးသားဖြစ်၏။ ငါ porn စွဲနှင့်မည်သို့ငါ့ကိုထိခိုက်နဲ့ငါ့အတိတ်သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူအတော်များများပြောနှင့်ပြီ။ တချို့ကကြမ်းတမ်းစွာကငါ့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူပေမယ့်ညာဘက်ငါ့ကိုပယ် slides ။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အတွက်လုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရဖြစ်၏။
ငါဖြည့်ဆည်းအစစ်အမှန်မိန်းမတို့အဘို့ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး) ကျွန်ုပ်၏နျဖိုးထားတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်သိရသည်။
ငါ porn သုံးတဲ့အခါငါ့အဘို့ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှသောအရာတစ်ခုခုကိုငါမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ ငါသူမကိုလွန်ခဲ့တဲ့ခုနစ်လကတွေ့ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါ့ဘ ၀ မှာငါရှိနေခဲ့တဲ့နေရာကိုသူမနဲ့လုံးလုံးလျားလျားရိုးသားခဲ့တယ်၊ သူကငါ့ကိုဘာကြောင့်ချစ်တာလဲဆိုတဲ့အရာကြီးလို့ငါထင်တယ်။ ဆက်ဆံရေးကအခုပြီးသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ •ကျွန်ုပ်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်များပိုမိုရရှိပြီးအချိန်ပိုပိုရနိုင်သည်။
အကြှနျုပျ၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့် willpower ရှေ့ဆက်သူတို့ဘယ်မှာ၏လိခ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါနေဆဲတခါတရံအခြိနျဆှဲဖို့လက်နက်ချပေမယ့်နောက်ဆုံးခုနစ်လအတွက်ငါ 60,000-စကားလုံးစာအုပ်ရေးထားပွီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်အလုပ်မှာမြှင့်တင်ရေးညှိနှိုင်း, လိုက်ကာလှပသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းတစ်တသမတ်တည်းယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တရားအားထုတ် regimen မွေးစား ငါ့ကိုအစဉ်အဆက်ထက်ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းခံစားသောအံ့သြဖွယ်အစားအသောက်များတွင်ပြောင်းလဲမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယခုတွင်ငါသည်ကြောင်း porn-တလျှောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းသုံးရင်နှင့်အတူနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တီဗီ / သာနောက်ကျောကိုငါ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်ရှာမှငါ့ကိုကျင်းပရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ငြိမ်စေသောဆေးရုပ်ရှင်တွေ-ဖြစ်ခဲ့သည်။
နော BE BE ဘုရားကျောင်း၏အင်တာနက်ပေါ်တွင်စွဲစွဲစွဲလမ်းမှုကိုအမေဇုံနှစ်ခုစလုံးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။US / UK) နှင့် Smashwords။ သူသည် SpanglerTV ဟုခေါ်သောစီးရီးတစ်ခုတည်းတွင်ပင်တူညီသောခေါင်းစဉ်ရှိဗီဒီယိုများကိုအတူတကွကြည့်ရှုနိုင်သည်။ You Tube ပေါ်တွင် Bvrning Qvestions
အသုံးဝင်သော Links များ Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ အမေဇုံ (ဗြိတိန်) တွင် Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ အမေဇုံ (ယူအက်စ်) ရက်တွင်
ဆန်းစစ်ခြင်း: Wack စွဲအင်တာနက်က Porn နောဧအားဖြင့်ဘုရားကျောင်း BE
Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ (၂၀၁၄) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လက်ရှိသုတေသနအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျင့်ကိုဖျောက်ရန်ကြိုးစားသူများအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ နော BE ဘီဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ သူ၏ပုံပြင်ကိုနာကျင်စွာရိုးရိုးသားသားဖော်ပြသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန်]
- ပိုမိုကြည့်ရှုရန် - http://www.bibliofreak.net/2014/08/interview-noah-be-church.html#sthash.WB4UkdRd.dpuf